Mobile Mapper 10, aragti hore - Geofumadas
Mobile Mapper 10, aragti hore
Juunyo, 2011 cadastre, Featured, GPS / Qalabka, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Ka dib gadashada ee Ashtech ee Trimble, Spectra ayaa bilaabay dhiirrigelinta walxaha Mobile Mapper. Waxyaabaha ugu fudud ee ka mid ah waa Mobile Mapper 10, oo aan rabo inaan fiiriyo waqtigan.
Maabka Mobileper Pro, CE iyo CX ayaa halkaas ku dhameysatay inkastoo kii dambe uu weli ku jiray suuqa; laga soo bilaabo tiknoolajiyadda Blade si fiican loo yaqaan ayaa la sii daayey Mobile Mapper 6, taas oo ah awoowaha tan oo aan hadda soo bandhigno. line waa kala duwan, sida MM6 ah inkastoo technology cusub marka la eego nidaamka qalliinka, kama badna ee Pro Mobile Mapper marka la eego waxqabadka, oo intaasu waxay ahayd aqbalana ah oo aad u wanaagsan oo awood u reading C / wajiga code iyo side A. Waxay keentay heerka caadiga ah ka dib iyo kharashka kama dambaysta ah oo leh hannaan wanaagsan oo ay ku socdeen Dollar 1,200 oo leh postproceso. Inkasta oo uu weli MM10 kaliya akhriya C / (heerka software, ma helo) code iyo technology A dhammaado gaari sentimitir 50 postprocessing; Waxaan mar walba awood postprocessing, laakiin doorashadan kharash ah $ 500 dheeraad ah, sida aad ka soo baxaan sida 1,900.
Sidee khadka Mobile-ka 10 uga duwan yahay maabka Mobile-ka 6
Guud ahaan, khilaafaadka waa muhiim. Marka la eego naqshadeynta, MM10 way dheer tahay, ballaaran tahay, laakiin sidoo kale hoos ayey u dhacdaa; iyada oo si wanaagsan loo qaybiyo booska; Marnaba ma ogaanin sababta ay u daadinayso dusha sare. Dhamaadka ugu dambeeya waxay leedahay dul-qaadka caagagga ah ee ka dhigaya mid fudud in la isku qabsado hal gacan.
Shaxda hoose waxay muujinaysaa dhinacyada oo qoyan oo aan siiyo iman kara ixtiraam 10 Mobile Mapper weyn MM6 iyo calaamadeeyaa casaan yihiin khasaaraha in ay yihiin lama huraan in la beddelo. Waxaan sidoo kale saarayaa santuuqa si aan u muujiyo waxa dhaca Mobile Mapper 100, kaas oo aan horay u hadlin.
Isku xirka GPS, SBAS GPS GPS, GLONASS, SBAS
Joogitaanka L1 L1 L1, L2
Cusboonaysii 1 Hz 1 Hz Saacadaha 0.05
Habka xogta NMEA NMEA RTCM 3.1, ATOM, CMR (+), NMEA
Waxay u shaqeyn kartaa sidii saldhig maya maya Si
Xaqiiqda marka la joogo xilliga dhabta ah ee SBAS 1 - 2. 1 - 2. in ka yar 50 cm .. ee SBAS, in ka yar 30 cm. ee DGPS.
Xaqiijinta dhejinta kadib in ka yar hal mitir in ka yar sanduuqa mitirka 50 1 cm.
Gacaliye 400 Mhz 600 Mhz 806 MHz
Nidaamka hawlgalka Windows Mobile 6.1 Windows Mobile 6.5 Windows Mobile 6.5
Isgaadhsiinta Bluetooth, USB Bluetooth, USB, GSM / GPRS, Wifi GSM / GPRS, BT, WLAN
Cabbirka X x 14.6 6.4 2.9 cm 16.9 x 8.8 x 2.5 cm X x 19 9 4.33 cm
Peso Gram 224 380 oo leh batari Gram 648
Memoria 64MB SDRAM, 128 MB Flash, xasuusta SD 128 MB SDRAM, 256 MB NAND, Micro SDHC Xasuuso ilaa 8GB 256 MB SDRAM / 2 GB NAND, Micro SDHC
Heerkulka ugu hooseeya -20 C -10 C -20 C
Heerkulka ugu sarreeya + 60 C + 60 C + 60 C
Taageeridaada iyo jahwareerka Saldhigga 1 Mitirka 1.20 oo la taaban karo Mitirka 1.20 ee la taaban karo, heerar dheeraad ah ETS300 019 & MIL-STD-810
Batariga Labo lamaane AA Litium / mudada ilaa saacadaha 20 Litium / mudada ilaa saacadaha 8
Nooca anteenada Gudaha / dibadda Gudaha / dibadda Gudaha / dibadda
Horumar xoog leh ayaa ku jira batteriga, halkii laga heli lahaa labada AA waxay keenaysaa batari Lithium leh madaxbannaan ilaa saacadaha 20; Wax xun maaha sababtoo ah waxay ku dhowdahay saddex maalmood oo shaqo ah saacadaha 7. Tani waxay ka caawisay inuu ku yareeyo dariiqa.
Kama hagaajinayso saxnaanta iyada oo aan la dhejineynin dib u socodka, waxay ku dhowdahay mareegta leh astamaha kala duwan ee mitirka 2. Waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo in ay tahay koox ka kooban hal mar oo keliya, ma taageerto RTK. Hase yeeshee, waxa ay hagaajineysaa marka la eego MM6 ee saxnaanta xogta ka dambeysa falanqaynta, taas oo ka hooseysa 50 cm, oo u dhiganta pixel-ka orthophoto caadiga ah ee sahanka miyiga.
Xaqiiqadan waxaa loo qaadanayaa sababtoo ah waxay leedahay qaybo badan oo ka mid ah kanaalada 20 (GPS L1 C / A iyo qaabka SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS). Waxaa intaa sii dheer in la fahamsan yahay in ay noqon karto dib-loo-shaqeeynta iyada oo la tixgelinayo saldhigga fog ee loo marayo GPRS ama Wifi.
Waxay keenaysaa qaab cusub oo Windows Mobile ah, processor-ka ayaa la hagaajiyay (Waa ARM9) laakiin heerka software wuxuu keenaa wax isku mid ah: Windows Mobile. Sync Active iyo Internet Explorer. Mobile Mapper Field waxaa ku jira, taas oo la mid ah Mabaadi'da Moobaylka leh horumarinta qaar; Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale taageertaa ArcPad inkastoo rukhsadani kaliya laga iibsan karo Maraykanka.
Sidoo kale xasuusta ayaa leh awood weyn, waxay keentaa 256 MB NAND (Flash aan joogtada ahayn), xitaa hadda waxay taageertaa MicroSD illaa 8 GB.
Sida aad u dheereyneyso waxaad iibsan kartaa antenna dibadda iyo rafiiqa si aad ugu daadiso kabo. Si aad udhaqaajiso ikhtiyaarka post-processing, furaha dhaqdhaqaaqa waa in la bixiyaa.
Qiimaha, hoos u dhacaya US $ 1,500 uma muuqato wax xun. Inkasta oo ra'yigeygu yahay kaliya jeebabka leh GPS iyo awoodda GIS.
Waxay u egtahay mid ku habboon caleemaha miyiga ah, miyiga, mashaariicda deegaanka ama kuwa ay ku jirto santimitirka 50 ee ku filan. Sida iska cad, waa in aan ka faa'iideysano GIS, maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaaddo lakabadaha qashinka, geesoolayaasha ama dhibcooyinka leh cadadka sifooyinka aan ku tallaabsaneyno, oo ay ku jiraan sawirrada iyo codka.
Waa inaan aragnaa waxa dhacaya haddii aan isticmaalno gvSIG Mobile si aan u helno wax ka badan moodhalka Mobile Mobile
Maxay ka dhigan tahay mashiinka Mobile 100
Dabcan, Khariidadda 10 Mobile waa qalab marka ay ku dhacdo Mobile Mapper 100. Taasina waa heer kale oo qalab ah oo sax ah oo caddaynta ka dambeysa oo la xidhiidha 1 cm, inkastoo ay weli tahay mid soo noqnoqota.
Waxaa dhici karta in dhibaatada ugu weyn ee MM10 ay tahay in aan la qiyaasi karin, waxay gaadhi kartaa ujeedooyinka loo sameeyey.
Dhinaca kale, khariidada xawaaraha 100 ayaa la cabbiri karaa. Iyada oo antenna dibedda iyo qaababka qaarkood waxay noqon kartaa Promark 100, oo leh waxyaabo kale oo badan oo ah Promark 200 oo horayba u taageertay laba jeer oo isdabajoog ah.
Inkasta oo ay ku jirto dibedda guryaha waa isku mid.
Waan arki doonaa isbarbardhig kale oo boosteejo ah.
Halkan waxaad ka heli kartaa wakiil ka mid ah waxyaabahaas.
Halkan waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo Ashtech ah.
GPS My aragti ugu horeysay
Post Previous«Previous Dhinaca kale ee IPad
Post Next Sida loo sameeyo dukaanka internetkaNext »
18 Jawaab "Mobile Mapper 10, aragti hore"
Waxaan u maleynayaa inaad tahay inaad ka hubsatid qaybiyaha xaafadda.
Roberto Gv isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaad i caawisid waxaan haysto GPS MOBILLE MAPPER 10, waxaan doonayaa inaan iibsado anteenaha dibadda, su'aalahayga nooca anteenaha si aad u iibsato iyo nooca qalabka wax u qabashada si aad u wanaagsan u shaqeyso
Usa Dukaanka Google si aad fikrad uga hesho isbeddellada qiimaha
HOLGER isagu wuxuu leeyahay:
sida ugu dhakhsaha badan waa tan sicirka rasmiga ee khariidadda moobiilka 100
Miguel Moreno isagu wuxuu leeyahay:
Maxaad u maleyneysaa maqaalkan? http://www.abreco.com.mx/gps/postproceso.htm
Waxaan haystaa khariidad xawaaladeed 10 leh nidaam gaaban, qalabkee ayaan ku heli karaa saldhig saldhiga ah iyo maxaa sax ah ayaan filan karaa?
MM 10 Software ma lagu rakibi karaa in ka badan hal kombiyuutar?
Taasi waxay kuxirantahay wadanka aad joogto. Waxyaabaha ugu macquulsan waxaa leh shirkad maxalli ah Topcon / Magellan
LAZARO isagu wuxuu leeyahay:
WAXAA LAHAYN WAXYAABAHA LAGA HELAYO: Halkee ayuu ku heli karaa qalabka loo yaqaan 'MM6', ee ku socota TUSMADA BUUXINTA LAGU QAADO IN LAGU HELAYO 100%.
WAXAAN KA HELI KARTAA HADDII AAD KA HELI KARTAA, WAXAY BUUXINAYAA WARAAQYADA SIDA LAGA HELAY.
Hello, aad u fiican
Waxaan raadinayay barta websaydhka 'Geofumadas' laakiin ma helin wax aan raadinayay, sidaa darteed waxaan go aansaday inaan si toos ah wax kaaga weydiiyo: ma haysaa hage / tilmaam ama ma garanaysaa meel kasta oo aan ka soo dejisan karo sida koox looga shaqeeyo garoonka ' ashtech mobilemapper 10 ». Waan ogahay in su'aashu aad u balaadhan tahay, laakiin waxkastoo aad ka faalloon karto waad ku mahadsantahay. Buugga adeegsadaha ee nooca 100 ma ansax u noqon karaa 10? Waa midka kaliya ee aan ku soo arkay shabakadaada. Waxaan booqday shabakadda 'Ashtch' oo wax badan ma arag. Kaliya waxaan hayaa buugga xirmada ee xafiiska.
ka baxa isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan hayaa mareeg 10 laakiin ma heli karo sida loo habeeyo nidaamka nat 27 oo leh xarig nat 27 xarig kaliya kaliya iyo dhererka ayaa u muuqda waxaanan u baahanahay "x" & "Y" & "Z"
Waa inaad isticmaashaa Xafiiska Moobilada Mobile, kaas oo aad ka soo qaadan karto bogga ASHTECH.
Waa inaadan khaldin Mabaadi'da Isku-dhafka ah ee software-ka kaas oo keenaya kooxdaas, oo leh barnaamijka "Mobile Mapping Office".
Iker isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan kireystay Mobile Mapper 6. Qofna ma yaqaanaa sida loo diiwaangaliyo waraaqaha mmw (jidadka) loo beddelo qaabab kale oo GIS ah? Ma i siinayso ikhtiyaarka Xafiiska Khariidadda Mobile Mobile
qoryaha alwarez cisneros isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan heystaa 35 Macaamiishada Meksiko iyo haddii aan u baahdo saxda ah, waxaan qabanayaa qorshaynta magaalada magaalooyinka ... taas oo soo jeedinaysa inaad iibsato qaddarkan ... fadlan i soo dir qiime
Osvaldo isagu wuxuu leeyahay:
Hada haddaba mid ka mid ah tirooyinka Trimble, haddii aan haysto miisaaniyad of 1500 dollars, maxaan ku talin lahaa Mobile Mapper ama Trimble Juno? Xaqiijinta, kalsoonida, navigada, gis, raaxada, iwm.
Juno waa mid aad u wanaagsan. Iyada oo dib-u-dhigista sax ah ay sax tahay agagaarka dhulka hoostiisa, iyada oo aan boostada la soo dhigin waa duuliyaha leh saxnaanta ka sarreysa 2.50
Alonzo isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ku saabsan Trimble Juno SB ee shaqada garoonka? Uma baahna xisaabinta mitirka